MAKIINADDA CARRUURTA SOO SAARAYAASHA IYO SOO SAARAYAASHA - Shiinaha Warshadaha MAKIINADDA DHAQAALAHA
BONOVO Dhexdhexaad Digger xcavator mashiinka dhaqaajiya Dunida qodista
Bonovo waxay bixisaa noocyo kaladuwan oo ah qodayaal qotodheer oo xajmi ahaan u dhexeysa 20 tan ilaa 34 tan. 20 tan oo wax guurguura oo ka socda Bonovo ayaa ujeeddadeed loo dhisay si loo daboolo baahiyaha suuqa aadka u baahan ee dhexdhexaadka ah. Qalabaynta dhamaadka-sare, mashiinka tamarta badan leh ee mashiinka mashiinka mashiinka farsamooyinka ah wuxuu leeyahay awood sare, isticmaalka shidaalka oo hooseeya iyo la qabsiga shidaalka oo awood badan. Iyada oo ujeedadiisu tahay mid ka mid ah qaybaha ugu tartamida badan ee suuqa qodista, Bonovo's WE220H qashin-qubka ayaa ah wehelka ugu habboon ee dalabyo badan oo dhexdhexaad ah.
BONOVO DIGDOG DG12 Mini Excavator leh lifaaqyo badan
DG12 mini Excavator oo leh qaab dhismeedka baalal yar yar oo Tailless ah iyo ikhtiyaar ikhtiyaar-wareejin ah, oo loo isticmaali karo hawlgalka cidhiidhiga
wareeg aan dabo lahayn, jiif dib loo celin karo, koranto leex leexad ah, qaabeyn heer-koowaad ah, nidaam hawleed tijaabo ah oo tijaabo ah, raad caag ah oo la beddeli karo, mishiin la soo dejiyey, heerka ilaalinta deegaanka (Euro 5 iyo EPA4)
BONOVO DIGDOG DG18 1.8 ton qodayaal mini qoda Crawler Hydraulic Mini Excavator
DG18 mini Excavator leh qaab-dhismeed baal yar oo Tailless ah iyo ikhtiyaar ikhtiyaar-wareejin, oo loo adeegsan karo hawlgal cidhiidhi ah
wareeg aan dabo lahayn, jiif laga noqon karo, koranto leex leexad ah, qaabeyn heer-koowaad ah, nidaam hawleed tijaabo tijaabo ah, raad caag la beddeli karo, matoorro dibedda laga keenay, heerka ilaalinta deegaanka (Euro 5) ayaa lagu qalabeyn karaa qol dhammaystiran oo xiran si loo helo jawi ku habboon shaqada.
BONOVO DIGDOG DG25 qoda qod qashin qotodheer 2.5 tan oo mishiinka dhulka dhaqaajiya yar qodista mini qodayaal
DG25 mini Excavator leh qaab dhismeedka baal yar oo Tailless ah iyo ikhtiyaar ikhtiyaar-wareejin ah, oo loo isticmaali karo hawlgalka cidhiidhiga ah.
Wareeg aan dabool lahayn, jiif laga jiidan karo, koranto leex leexad ah, qaabeyn heer-koowaad ah, nidaam hawleed tijaabo ah oo xamuul ah, raad caag la beddeli karo, matoorro dibedda laga keenay, heerka ilaalinta deegaanka (Euro 5) ayaa lagu qalabeyn karaa qol dhammaystiran oo xiran si loo helo jawi ku habboon shaqada. Waxaa loo cusbooneysiin karaa matoorka Kubota ee Jabbaan oo lagu qalabeeyaa qol ay si buuxda uxirantahay.
BONOVO DIGDOG DG20 mini qodayaasha 2ton gurguurta Shiinaha qod qodista
DG20 mini Excavator leh qaab-dhismeed baal yar oo Tailless ah iyo ikhtiyaar ikhtiyaar-wareejin, oo loo adeegsan karo hawlgal cidhiidhi ah
wareejin bilaa dab ah, jiif laga jiidan karo, kor u kaca leexashada, qaabeynta heerka koowaad, duubista nidaamka howlgalka tijaabada ah, wadada cinjirka ah ee la bedeli karo, mishiinka la soo dejiyo, heerka ilaalinta deegaanka (Euro 5 iyo EPA 4) Waxaa lagu qalabeyn karaa qol buuxa oo xiran si loo helo jawi raaxo leh shaqo. Waxaa loo cusbooneysiin karaa Tamarta CASAPPA qalabka wax lagu rido iyo nidaamka dareemida culeyska
Bonovo mini qodayaasha waxaa loogu talagalay hawl wadeenada si kor loogu qaado raaxada cabsida iyo astaamaha keydinta shidaalka ee keenaya kala duwanaansho, hufnaan iyo wax soo saar goobtaada shaqada ah. Waxaad dooran kartaa lifaaqyo kaladuwan oo kaladuwan si aad ugu haboonaato shaqooyinkaaga gaarka ah, kooxda Bonovo ayaa ku siin karta qalabka dayactirka ee ugu fiican iyo adeegga iibka kadib.